Ciidamada Ethiopia oo dad Rayid ah ku dilay Mooyaale | SomaliSwiss Wararka Somaliswiss
Home / Wararka Maanta / Ciidamada Ethiopia oo dad Rayid ah ku dilay Mooyaale
Ciidamada Ethiopia oo dad Rayid ah ku dilay Mooyaale
Ciidamada milateriga Ethiopia ayaa 9 Qof oo Rayid ahaa ku dilay deegaanka Mooyaale ee dhaca xaduudka dalalka Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia.
Taliye ka tirsan Ciidamada milateriga dalkaasi ayaa sheegay in dadkaasi ay ku qaldameen Ciidamadooda, islamarkaana ay halkaasi u joogeen sidii ay uga hortagi lahaayeen weeraro la sheegay in Jabhadda ONLF ay qorsheyneysay in ka soo qaado halkaasi.
Jawar Maxamed oo ka mid ah shaqalaha hay’ad ka shaqeysa arrimaha xuquuqul insaanka oo fadhigeedu yahay dalka Mareykanka ayaa sheegay in dhimashadu ay intaasi ka siyaaday, islamarkaana dhaawacyadu ay gaarayaan illaa iyo 12 Qof oo Rayid ah.
Ciidamo ka tirsan kuwa milateriga Ethiopia ayaa 16- bishii aynu ka soo gudubnay ee Febuary loo daad gureeyay dhanka deegaanka Mooyaale ee Xuudka Soomaaliya ay la wadaagto dalalka Kenya iyo Ethiopia.
Ma jirto weli wax hadal ah oo ka soo dowladda dhexe ee Ethiopia oo ku aadan dilka dadkaasi Rayid ka ah ee Ciidamadeedu ay ku laayeen halkaasi, marka laga reebo Duqa magaalada Mooyaale oo sheegay in ay baarayaan sababta ka dambeysay dilka dadkaasi.
Ethiopia ayaa dhawaan heshiis kula gaartay Jabhadda ONLF M/ Nairobi ee Caasimadda dalka Kenya, kaas oo dhigayay in ONLF ay Joojiso dagaallada ay ka wado dalkaasi.